हरेक एक सय वर्षमा किन हुन्छ महामारी ?
कतिपय देशमा पटक–पटक महामारीको आक्रमण हुने गर्दछ । जसले पूरै विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । हालसम्म महामारीका कारण हजारौँ मानिसहरुको ज्यान गइसकेको छ ।
सन् १७२०, फेरि १८२०, त्यसपछि १९२० र अब २०२० । यो एउटा संयोग हो वा केही अरु नै तर विगत ४ सय वर्षमा हरेक एकसय वर्षपछि एउटा यस्तो महामारी आएको छ, जसले पूरै विश्वमा नै तहल्का मच्चाएको छ । हरेक एकसय वर्षमा आउने यस्तो प्रकारको महामारीले विश्वको कुनै पनि कुनालाई बाँकी छोडेको छैन । करोडौँ मानिसहरुको ज्यान लिनुका साथै यसले कयौँ मानव बस्तीको नामो निशान मेटाइदिएको छ ।
विश्वमा हरेक एकसय वर्षमा महामारीको हमला भएको छ । सन् १७२० मा विश्वभर द ग्रेट प्लेग अफ मार्सेल फैलिएको थियो । जसमा एक लाख मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो । त्यसको एकसय वर्षपछि सन् १८२० मा एशियाली देशमा हैजा फैलियो । त्यसमा पनि एक लाख भन्दा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाउन पुगे ।
यसैगरी सन् १९१८–१९२० मा विश्वले स्पेनिश फ्लूको त्रासको सामना गर्नुपर्याे । यस बिमारीले उक्त समयमा करिब ५ करोड मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो । अब फेरि त्यसको ठीक एकसय वर्षपछि सन् २०२० मा विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास जारी रहेको छ । जसका कारण पूरै विश्वभर लकडाउन लागू रहेको छ ।
इतिहासका बाँकी बिमारीहरु जस्तै समयमै कोरोनाको पनि कुनै भ्याक्सिन पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । भाइरसबाट विश्वभर हालसम्म १५ लाखभन्दा धेरै मानिसहरु संक्रमित भएका छन् भने ८८ हजारभन्दा धेरै मानिसहको मृत्यु भइसकेको छ ।
हरेक शताब्दीमा आउने महामारीको कहानी के हो ? किन हरेक एकसय वर्षमा नै मानवीय सभ्यतामाथि हमला हुन्छ ? किन सबै कुरन भएर पनि मानिसहरु यस महामारीका सामुन्ने बेबस हुन पुग्छ? कसैले पनि हालसम्म यो कुराको बारेमा बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।
बिगत ४ शताब्दीमा हरेक एकसय वर्षमा अलग–अलग महामारीले विश्वभर हमला गरेको छ र यसैका कारण हरेक पटक लाखौँ मानिसरुको मृत्यु भएको छ ।- एजेन्सीको सहयोगमा